Maoritania: Hetsika 25 Febroary Mitsipaka ny [Fibaikoana] Fanaraha-mason’i Frantsa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2012 15:26 GMT
Mandalo vanim-potoana ara-politika tsy ahatsinjovana ny ho avy i Maoritania hatramin'ny nandefasana ny filoha Mohamed Ould Abdel Aziz hotsaboina any Paris rehefa naratran'ny tifi-bala izy tamin'ny 13 oktobra 2012. Mifandamina ny ao Maoritania mandra-piveriny saingy maro ny Maoritaniana no manontany tena amin'ny anjara andraikitr'i Frantsa amin'ny toe-draharaha ankehitriny.
Fihetsika nisabakabaka nataon'i Frantsa tamin'ny 2008
Tamin'ny 2008, nisy fanonganam-panjakana nanala ny filoha Sidi Ould Cheikh Abdallahi ary nandray ny fahefana i Mohamed Ould Abdel Aziz. Vincent Hugueux nanazava fa nampiseho fihetsika farafahakeliny mampiroanahana tamin'ity fanonganam-panjakana ity i Frantsa :
Teo anatrehan'ny zava-misy tsy azo anoharana, haingana dia haingana ny nampanginan'ny sekretera jeneralin'ny Lapam-panjakana ao Elysée, Claude Guéant,ireo “legalista” mitaky ny hamaizana amin'ny fomba henjana sy ny hialàn'i Aziz, raha tsy tiana ny hiverenan'ny toe-javatra teo aloha, izay samy tsy misy tia izany koa. Ho porofon’ izany ny fahasahian'i Nicolas Sarkozy nitantara fa tsy nisy nitsipaka, raha ny tao amin'ny firenena, ny fanambarana nataon'ny Aziz haka ny fahefana manontolo tamin'ny 27 Marsa  […] Nanomboka teo amin'io fotoana io dia tsy navotsotry ny ekipan'i Guéant intsony ilay manamboninahitra eo ambany fiarovany. Marina fa noreseny lahatra ranamana io tsy hanao an-terisetra, araka ny natoron'ilay Libyana Muammar Gaddafi: fifidianana sandoka natao ankahamehana saiky hotontosaina ny 6 Jona (naoty: tsy notontosaina tamin'io fotoana io ny fifidianana)
Mpanao gazety Maoritaniana sady blaogera Dr Elycheikh Bah Ahhmedtolba manazava, fa hatramin'izao, dia mbola manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainana politika any Maoritania ihany i Frantsa:
Efa nisy hatramin'ny talohakelin'ny fanjanahantany ny resaka fiankinana amin'i Frantsa ary nahatratra ny faratampony izany tamin'ny fotoana nolazaina fa nahazoana ny fahaleovantena; hatramin'izany fotoana izany nisy ireo taranaka indray nihira no nianoka tamin'ny tombontsoa azony. [..] Adidintsika taranaka indray mihira vaovao no, farafaharatsiny, mikarajia na mizara hevitra momba ny anjara toeran'ny Mpiambina ny Politika Antitra eo amin'ny fifampiraharahan'i Frantsa amin'ny fitondrana miaramila amin'ny fomba ifikirana amin'ilay efa nanjavona Aziz eo amin'ny faratampon'ny firenena na mampakatra mpiray tsikombakomba vaovao indray hanomana ady any Avaratr'i Mali.
Ny hetsika 25 febroary sy ny fanentanana “Tsy ilaina ny Fanaraha-maso [Fibaikoana]”
Nanangana ny Hetsika 25 Febroary ny tanora Maoritaniana ho fanoherana ny fitondrana miaramila mifanesy. Manazava i Ahmed Jedou [fr] amin'ny antony mahatezitra ity hetsika ity amin'ny lazain-dry zareo ho fanaraha-mason'i Frantsa:
Izahay ao amin'ny Vondrona 25 Febroary, mijery ny fitohizan'ny fitsabahana frantsay amin'ny raharahan-tokantrano maoritaniana sy ny fiantraikan'izany, indrindra amin'izao vanim-potoana iainan'ny firenena ankehitriny izao, dia manambara ny fanombohan'ny fanentanana hanohitra ny fanaraha-maso ataon'ny vahiny. Amin'ny alalan'ity fanentanana ity no ahafahanay mitondra izao hafatra izao hipaka any amin'ny fitondrana sy ny fijerin'ny frantsay amin'ny ankapobeny: Ny fanapahan-kevitry ny tanora maoritaniana hiady amin'ny jadona apetraky ny zanaky ny firenena eo ambany fanaraha-maso [fibaikoana] vahiny. […] Hotsaroan'ny tantara ireo naka ny andaniny namaly ny hetahetan'ny vahoaka sy ireo nanohitra ny vahoaka tamin'ny fanohanana fitondrana jadona.
Afisin'ny Hetsika 25 Febroary “Tsy ilaina ny Fanaraha-maso [na fibaikoana]” (“Ekena ny Fiaraha-miasa”) via Ahmed Jedou nahazoana alalana
Nanampy ny Habaka famoaham-baovao Alakhbar [fr]:
Manambara ny Fiaraha-mientana fa na teo aza ny lasa nisian'ny fanjanahantany dia maniry ny isian'ny fifandraisana marindanja sy mahatoky amin'i Frantsa isian'ny fiaraha-miasa miaro ny tombontsoan'ny vahoaka roa tonta. Milaza ny fahafaham-pony tamin'ny fanambaran'i Francois Hollande tany Dakar [Senegal] fa tapitra hatreo ny vanim-potoana Frantsa-Afrika izay nampijaly an'i Maoritania sy nampahomby ny fanonganam-panjakana nataon'ny Jeneraly Aziz tamin'ny 2008.
Tao amin'ny twitter, nofidian'ny fanentanana hampalaza azy ny tenifototra #NonAlaTutelle [Tsy mila fibaikoana]. Maro ny olona nanohina tao amin'ny twitter tamin'ny resaka vao haingana nifanaovan'ny filoha frantsay Francois Hollande sy ny filoha Aziz tamin'ny 20 Novambra:
@Sidimedlemin: Nasehon'ny resaka nifanaovan'i Hollande sy Aziz androany fa mbola ambany fiarovana ihany isika #NonALaTutelle #France #Mauritanie @Elysee
Nisy fihetsiketseham-panoherana ny Fibaikoana Frantsay notontosaina tamin'ny 21 Novambra 2012, tao Nouakchott, Maoritania, narakitry ny mpisera YouTube jnsrfd [ar]:
Hita taratra ho noarahabain'ny vahoaka maro ihany koa ny fiverenan'ny filoha Aziz tao Maoritania tamin'ny 24 Novambra. Namoaka lahatsary tamin'ny fahatongavan'ny filoha tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Nouakchott, Maoritania, ny mpisera YouTube CricemClaude [ar]:
Araka ny nolazain'ny AFP hita ao amin'ny vohikalam-baovao romandie.com [fr]:
An'aliny ireo olona nihoby azy nanerana ny lalana telo kilometatra nanelanelana ny seranam-piaramanidina tamin'ny lapam-panjakana iasan'ny filoha.
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity ihany koa i Ahmed Jedou sy i Thalia Rhame